हराएको कुकुर - बिरालो हराएको - भेटियो? | Internationale Hunde & Katzen Datenbank
ध्यानाकर्षण : vets – पशु संरक्षण संगठन – पशु संरक्षक
तपाईंले कुकुर वा बिरालो भेट्टाउनुभयो?
हराइरहेको कुकुरहरू र बिरालाहरू खोज्नुहोस् MICRO-CHIP नम्बरहरूको साथ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय डाटाबेसमा हराइरहेका जनावरहरू। खोजी र नतीजाहरू १० languages ​​भाषाहरूमा उपलब्ध छन्!
महत्वपूर्ण: एनिमल मित्रहरू – कुकुर मालिकहरू – बिराला मालिकहरू
सावधानीको रूपमा, तपाईंको कुकुर वा बिरालोलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कुकुर र बिरालो डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्नुहोस् !
तपाईंको कुकुर वा बिरालो भेटिए पछि सूचित गर्नका लागि तपाईंको सम्पर्क विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
अब दर्ता गर्नुहोस्: https://www.chipzenrale.com